Fair Usage Policy | Telenor Myanmar
ဤ တရားမျှတစွာ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ ("မူဝါဒ") သည် Telenor နှင့် Telenor Broadband ( နှစ်ခုစလုံးကို "Telenor" ဟုရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းမည်) နှင့် Telenor Broadband အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ ကို သုံးစွဲသည့် အသုံးပြုသူများကြားတွင် အတိုင်းအတာအားဖြင့် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် ကျင့်ဝတ်များကို ချမှတ်ပေးပါသည်။ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအားလုံးသည် မိမိတို့၏အင်တာနက်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိုသုံးစွဲမှုသည် တစ်ပါးသော သုံးစွဲသူများအပေါ်တွင်မည်သို့မျှ သက်ရောက်ထိခိုက်မှုမရှိအောင် တာဝန်သိသိ၊ တာဝန်ရှိရှိ နှင့် တာဝန်ခံယူလိုစိတ်အပြည့်ဖြင့် သုံးစွဲကြလိမ့်မည်ဟု Telenorက ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါသည်။
customerတစ်ဦးချင်းစီအတွက် အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် အမြဲတမ်းရရှိနေမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ရရှိနိုင်သော bandwidthသည် တစ်ချိန်တည်း၌ အသုံးပြုနေသည့် အသုံးပြုသူများအားလုံးက ဝေမျှအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်သော(၁% ပမာဏခန့်မျှ ရှိသော) အသုံးပြုသူများက ကြီးမားသော bandwidth (၃၀%ခန့်ရှိသော)ပမာဏကို သုံးစွဲကြသည်ဟု ​ကျွန်ုပ်​တို့၏ အချက်အလက်နှင့် အခြားသော အခြားbroadband အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ အချက်အလက်တို့ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ သိရှိရပါသည်။
အကယ်၍ အသုံးပြုသူများသည် ၁:၁ ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏bandwidthကို သီးသန့်အသုံးပြုချင်လျှင် အသုံးပြုသူသည် World Wide Web routerအထိ မည်သူမျှမတွေ့မရောက်နိုင်သော အင်တာနက် ငှားရမ်းလိုင်းတစ်ခု လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ဤကဲ့သို့ မမျှမတဖြစ်မှုမျိုးကို ကျော်လွှား၍ Telenor၏ သုံးစွဲသူများအားလုံး ကောင်းမွန်သော အတွေ့အကြုံများဖြင့် သုံးဆောင်ခံစားနိုင်ရေးကိုသေချာစေရန်အတွက် ဤပေါ်လစီကို ချမှတ်ထားရှိပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤတရားမျှတစွာ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒသည် Telenor Broadband စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
၂. ပုံမှန်မဟုတ်သည့် သုံးစွဲမှုများ
Telenor မြန်နှုန်းမြင့် ၀န်ဆောင်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် အင်တာနက် ၀င်ရောက်ရယူနိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုသုံးစွဲမှုကို (ပုံမှန်) (သမရိုးကျသုံးစွဲမှု) မဟုတ် ဟု ကျွန်ုပ်တို့က ယူဆမည်၊ အကယ်၍ လူကြီမင်းသည်
လူကြီးမင်း၏ မိမိကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ဖုန်ခေါ်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် SMS ပေးပို့ခြင်းများမှ တပါး
​ကျွန်ုပ်​တို့၏ ၀န်ဆောင်မှု နှင့် ကွန်ရက်ပေါ်က အချက်အလက်ဒေတာများကို လက်ကားသုံးစွဲခြင်း
​ကျွန်ုပ်​တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုကို တဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် မျှဝေပေးခြင်း၊ နေရာ အဆောက်အုံပရဝဏ်အတွင်း Telenor၏ကွန်ရက်ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော အခြားအသုံးပြုသူများအား လူကြီးမင်း၏ ၀င်ရောက်ရယူသုံးစွဲခွင့်/၀ိုင်ဖိုင်(Wi-Fi)ကို တဆင့် ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် မျှဝေပေးထားခြင်း။
အခြားသော သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ​ကျွန်ုပ်​တို့၏ ကွန်ရက်ကို ၀င်ရောက်ရယူရာတွင် အကန့်အသတ်အဟန့်အတားဖြစ်စေသည့် လိုင်းတစ်ခုကိုနာရီများစွာ ကြာမြင့်သည့်တိုင်အောင် ဖွင့်ပေးထားနိုင်စွမ်းရှိသည့် ခလုတ်များ၊ ကိရိယာများ ကို ဖန်တီးပြုလုပ်တပ်ဆင်ထားရှိခြင်း
၃. ဥပဒေနှင့်မညီညွှတ်သော လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မူများ
Telenor မှပေးအပ်သောTelenor Broadband၀န်ဆောင်မှုနှင့်/သိုမဟုတ် အခြားသော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားမည့်သည့် မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု တို့ကို လူကြီးမင်း သုံးစွဲရာတွင် မြန်မာ့ဥပဒေများနှင့် အညီသာလျင်သုံးစွဲရမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်တရားမဝင်သုံးစွဲခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းကဲ့သို့ Telenor ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေနိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို သိလျက်နှင့် ယင်းကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်မပြုရ။
Telenor Broadband၀န်ဆောင်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားသော အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားမည့်သည့် မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု တို့ကို တရားဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီစွာ လူကြီးမင်း သုံးစွဲသည်ဟု မှတ်ယူမည်၊ အကယ်၍ လူကြီးမင်းသည်-
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ရုံး/corporate packages အစီအစဉ်အောက်တွင် ၀ယ်ယူထားခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ငန်းအတွက် ရည်ရွယ်ခြင်း
corporate package အောက်တွင်စီစဉ်ဝယ်ယူထားရှိမှုကို ပုံမှန် မဟုတ်သော လုပ်ငန်းအတွက် ရည်ရွယ်သုံးစွဲ၍ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း
(ဗိုင်းရပ်များပါသော ဖိုင်များ၊ မှောက်မှားပျက်ယွင်းစေသော ဖိုင်များ၊ သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် အလားတူ ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်များ အကန့်အသတ်မဲ့ အပါအဝင်)များကို ယင်းတို့သည် Telenor သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် အင်တာနက်သုံးစွဲသူ သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်တို့မဆို ပိုင်ဆိုင်သော မည်သည့် ကွန်ပြူတာ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ(hard ware)တို့၏ စွမ်းဆောင်မှု၊ လုပ်ဆောင်မှုတွင်မဆို အနှောင့်အယှက်ပြုခြင်း၊ ပျက်ပြားစေခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ဟန့်တားမှုတို့ကို ဖြစ်ပွါးစေမည် သို့မဟုတ် ဖြစ်တန်စွမ်းရှိမည်ဟု သိရှိထားသော မည်သည့် အီလက်ထရွန်းနစ် အရာဝတ္ထု(electronic material) သို့မဟုတ် SMS /စာတိုသတင်းတို့ကိုမဆို တမင်ရည်ရွယ်၍ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ပေါ့လျော့ပျက်ကွက်သော အားဖြင့်ဖြစ်စေ ထုတ်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် uploadတင်ခြင်း
"၀န်ဆောင်မှုကို ငြင်းပယ်စေခြင်း" ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ "စာပို့-ဗုန်းကြဲခြင်း" ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ "spam စာပို့ခြင်း" သို့မဟုတ် "ပြည့်လျှံကြပ်ညပ်" စေခြင်းနည်းများဖြင့် ကွန်ရက်တစ်ခု သို့မဟုတ် မူလပင်မ host ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း
လူကြီးမင်း၏ သုံးစွဲသူသက်သေခံအထောက်အထား (user ID) နှင့်/သို့မဟုတ် စကားဝှက်တို့ အမြဲတစေ မပေါက်ကြားဘဲ ရှိနေရေးကို သေချာစေရန်မှာ လူကြီးမင်း၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ လိုအပ်သည်ဟု ယူဆရပါက သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ သုံးစွဲသူသက်သေခံအထောက်အထား(user ID) နှင့်/သို့မဟုတ် စကားဝှက်တို့ကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲရန် Telenor က မေတ္တာရပ်ခံပါမည်။
သုံးစွဲသူသည် အခြားမည်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့ထံသို့မျှ ၄င်းတို့၏သုံးစွဲသူသက်သေခံအထောက်အထားကို ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မဆို ယင်းစကားဝှက်တစ်ခုတည်းကိုပင် သုံးစွဲ၍ ၄င်းအနေဖြင့် ၀င်ရောက်ခွင့်မရှိသော ၀န်ဆောင်မှု၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ ၀င်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ၀င်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်း အပါအဝင် ကွန်ရက်ကို မသင့်မလျော် သုံးစွဲခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သောကိစ္စများတွင် သုံးစွဲမှုမပြုလုပ်ရပါ။
သုံးစွဲသူသည် တတိယပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့တစ်ခုမှ ၀င်ရောက်ရယူခြင်းမှ တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန် လိုအပ်သော သင့်လျော်သည့် အလုံးစုံသော တားဆီးကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်ထားရန် တာဝန်ယူရမည်။
အကယ်၍ သုံးစွဲသူသည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ် ပြဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်မှုတစ်စုံတစ်ရာ သို့မဟုတ် ယင်းကဲ့သို့သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာတစ်စုံတစ်ရာကို သတိထားမိပါက Telenor အားချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။
သုံးစွဲသူသည် ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ တွဲဖက်သုံးစွဲလျက်ရှိသော သုံးစွဲသူ၏ ကွန်ပြူတာ(များ)၊ မိုဘိုင်း ပစ္စည်း နှင့် အခြားမည်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲတို့ကိုမဆို လုံခြံုမှုရှိစေရန် စီမံဆောင်ရွက်၍ အကာအကွယ် ချမှတ်ပြုလုပ်ထားရန် တာဝန်ရှိသည်။
သုံးစွဲသူ၏ကွန်ပြူတာ(များ) သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းပစ္စည်းကို အင်တာနက်လုံခြုံရေး သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်များကို ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်နိုင်မည့် ဆော့ဖ်ဝဲ (anti-virus software)များဖြင့် အကာအကွယ်ပြုလုပ်ထားရန် Telenor အနေဖြင့် အလေးအနက် တိုက်တွန်းအကြံပြုပါသည်။
၅. ၀န်ဆောင်မှုကို ယေဘုယျသုံးစွဲခြင်း နှင့် အလွှဲသုံးစားပြုခြင်း
Telenor၏ သုံးစွဲသူများသည် အနည်းဆုံး အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူများဖြစ်ရမည်။ ဤအသက်အောက်ငယ်ရွယ်သော တဆင့်ခံသုံးစွဲသူများသည် Telenor Broadband ၀န်ဆောင်မှု နှင့်/သိုမဟုတ် အခြားသော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားမည့်သည့် မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု တို့ကို ၀င်ရောက်ရယူရန်အတွက် အကောင့်ပိုင်ရှင်ထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားရမည်။ Telenor Broadband ၀န်ဆောင်မှု နှင့်/သိုမဟုတ် အင်တာနက် ၀င်ရောက်ရယူနိုင်ရေး အခြားသော မည်သည့် ၀န်ဆောင်မှုတို့ကို သုံးစွဲခြင်းမတိုင်မီ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်သည် စာရင်းသွင်းထားသော သုံးစွဲသူထံမှ ခွင့်ပြုချက်ကိုရရှိထားရမည်။
သုံးစွဲသူသည် Telenor Broadband၀န်ဆောင်မှုပေါ်တွင် port scanning ဆော့ဖ်ဝဲကို လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။
သုံးစွဲသူသည် မည်သည့် ကွန်ပြူတာစနစ်ကိုမဆို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ၀င်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းမပြုရ။
သုံးစွဲသူသည် Telenor Broadband ၀န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် Telenor၏ အခြားမည့်သည့် မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားသော အင်တာနက်ဝင်ရောက်ရယူနိုင်ရေး ၀န်ဆောင်မှု အပေါ်တွင် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည့် လုပ်ကိုင်ဆောက်ရွက်မှု တစ်စုံတစ်ရာကိုမျှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။
သုံးစွဲသူသည် ပရိုဂရမ်များ(programs)အား လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ရန် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်ရှိ သတင်း၊ အချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်သည့် ဆာဗာများကို လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ရန် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုအတွက် တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသည့် မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့၏ နေရာတွင်မဆို လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ၄င်းတို့၏ Telenor Broadband ၀န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အခြားမည့်သည့် Telenor မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားသော မည်သည့် အင်တာနက်ဝင်ရောက်ရယူနိုင်ရေး ၀န်ဆောင်မှုတို့ကိုမဆို သုံးစွဲခြင်းမပြုရ။ တားမြစ်ထားသော ပရိုဂရမ်(programs)များပါ၀င်သော နမူနာများမှာ စာပေးပို့ခြင်း(mail)၊ FTP၊ HTTP၊ ဂိမ်း(game)၊ newsgroup၊ proxy နှင့် IRC ဆာဗာများ သို့သော် ယင်းတို့မျှသာဟုကန့်သတ်မထားပါ။
သုံးစွဲသူများသည် ၄င်းတို့၏ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကို ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် တနည်းအားဖြင့် အခြားသူများကို အခကြေးငွေဖြင့် အသုံးပြုစေခြင်း တို့ကို မပြုလုပ်ရပါ။ ဤဝန်ဆောင်မှုသည် မိမိအနားယူ အပန်းဖြေရာတွင် သုံးဆောင်ခံစားရန်၊ နေအိမ်သုံးရန်၊ တစ်ကိုယ်ရေသုံးရန်အတွက်မျှသာဖြစ်၍ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်မှု လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သုံးစွဲခြင်းပြုရန်မဟုတ်ပါ။
Telenorသည် မိမိတစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဖြင့် သုံးစွဲသူ၏ အင်တာနက် သုံးစွဲမှု အပိုင်း( internet session)အတွင်း ဆောင်ရွက်မှုကင်းမဲ့သည့်ကာလ နောက်ပိုင်းတွင် အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်သည် ယင်းသည် မိနစ်(၂၀)မှ (၃၀) အတွင်း အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ အလိုအလျှောက်ဖြတ်တောက်ပစ်ရခြင်းသည် ကွန်ရက်ကို အမြင့်ဆုံး စွမ်းဆောင်မှုဖြင့် စွမ်းဆောင်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။
၆. အလွန်အကျွန် သုံးစွဲခြင်းများ
​ကျွန်ုပ်​တို့၏ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်နှင့်မိုဘိုင်း ၀န်ဆောင်မှု/များကို လျင်မြန်စွာနှင့် အချိန်တိုင်းတွင် သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက် ရရှိစေလိုသည်မှာ ​ကျွန်ုပ်​တို့ Telenor၏ သဘောထားဖြစ်ပါသည်။ ဤစာပိုဒ်ကို ထိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားပါသည်။ Telenor၏အမြင်မှာ Bandwidth ကျယ်ပြောမြင့်မားစွာ သုံးစွဲသူအနည်းငယ်ကြောင့် သုံးစွဲသူအများစုအနေဖြင့် ပိုမိုနှေးကွေးသော ၀န်ဆောင်မှု ကိုသာရရှိသုံးဆောင်ခံစားနေရခြင်းသည် သင့်လျော်မှန်ကန်မှုမရှိဟု ခံယူပါသည်။
သုံးစွဲသူအနည်းငယ်မှ အလွန်အမင်းများပြားသော အချက်အလက်များပါ၀င်သော ဖိုင်များကို ပေးပို့ရန်နှင့်လက်ခံရရှိရန် (အသွားအလာကို အကန့်အသတ်မရှိစီးဆင်းမှုအပါအဝင်) သုံးစွဲသော (Bit Torrent၊ eDonkey၊ Gnutella တို့ကဲ့သို့သော) Peer-to-Peer ဆော့ဖ်ဝဲ/အပလီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် ဖိုင်မျှဝေသုံးစွဲနိုင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲ (Limewire ကဲ့သို့သော) အချို့သော ဆော့ဖ်ဝဲ/အပလီကေးရှင်းများ။ ဤကဲ့သို့ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုများသည် ကွန်ရက်တွင် ပြွတ်သိပ်ကြပ်ညှပ်မှုများကို ဖြစ်ပွါးစေနိုင်သည့်ပြင် အင်တာနက်ကို အခြားသောသုံးစွဲသူများ ၀င်ရောက်ရယူနိုင်သည့် အမြန်နှုန်းအပေါ်တွင် အနှုတ်လက္ခဏာဖြင့် သက်ရောက်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
Peer-to-Peer နှင့်ဖိုင်များကိုမျှဝေသုံးစွဲနိုင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲ /အပလီကေးရှင်း သုံးစွဲသူများသို့ ၀န်ဆောင်ပေးမှု အတိုင်းအတာ နှင့်/သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်နိုင်မှုတို့ကို Telenor မှ အာမ မခံပါ။
၇. မူဝါဒချိုးဖောက်မှုအပေါ်တွင် စည်းကြပ်အရေးယူခြင်း
ဤပေါ်လစီမူဝါဒကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သော သုံးစွဲသူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Telenor သည် မိမိ၏ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ဖြင့် သုံးစွဲသူ၏ Bandwidth ကို စီမံကွပ်ကဲဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ မိမိ၏ဝန်ဆောင်မှုကို ဆိုင်ငံ့ထားခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်စဲပစ်ခြင်း (အကြောင်းကြား၍ သို့မဟုတ် အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ Telenor ကသင့်တော်သည်ဟု ယူဆသည့်အတိုင်း) အပါအဝင် ယင်းတို့ကိုတုန့်ပြန်သည့်အားဖြင့် ရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းပြုမည်။
ဤမူဝါဒကို Telenor က စည်းကြပ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုများ အထူးသဖြင့် မြန်မာ့ဥပဒေများ၊ တစ်စုံတစ်ရာသော အမိန့်၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်ကမ်းများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ် နှင့်/သို့မဟုတ် မည်သို့သော မမှန်မကန်သုံးစွဲမှု အတွက် မည်သည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင်မဆို အခြားသောဥပဒေရေးရာ စည်းကြပ်ဆောင်ရွက်သူများ နှင့်/သို့မဟုတ် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့(regulatory bodies)တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လူကြီးမင်းက Telenor ကို ခွင့်ပြုထားပါသည်။
Telenor၏ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သို့သော တရားမဝင်သုံးစွဲခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိသည့် သုံးစွဲမှုများကို သတင်းပေးပို့ရန်အတွက်Telenor Call Center- ဖုန်း ၉၇၉၇၉၉၈၈၈၈ သို့ ကျေးဇူးပြု၍ ခေါ်ဆို ပေးပို့ပါ။